Maninona moa raha voaroaka? | Hevitra MPANOHARIANA
Maninona moa raha voaroaka?
2007-05-12 @ 12:32 in Finoana
Mbola resaka Sylvain Urfer, sj ihany ity fanontaniana mety hahatezitra ny maro ity. Nandalo izay ny fihetseham-po. Fantatsika fa tsy namaly ny avy any amin’ny fitondram-panjakana. Misy moa miteny hoe zon’ny fanjakana ny tsy mamaly izay antony tahaka ny tsy amalian’ny Frantsay ihany koa ny antom-pandavana fangatahana miditra any Frantsa. Fiarovana ny tenany no ataony. Dia mihevitra ihany koa ny fitondram-panjakana fa miaro ny tenany ihany koa izy. Marihina moa fa efa nosoratako tao amin’ny lahatsoratra talohan’ity ny antony efa voasoratra nomena ny gazety « Ny vaovaontsika ».
Dia lasa ihany ny saina na dia izany aza. Sarotra ny handresy lahatra amin’ny filazana tsotra hoe fanohintohinana ny filaminam-bahoaka. Tokony holazaina mazava tsara manko ilay karazana fanohintohinam-bahoaka fa tsy atao manajavozavo be sahala amin’izany. Nefa raha tonga tokoa moa ilay fanazavana ary mipetrapetraka tokoa. Dia iza no manana ny fahafaham-baraka kokoa ? saingy eritreritra ihany manko no soratana ankehitriny. Mba te-hitazona ny antony ho azy ny mpitondra tsy hanala baraka olona ? ny fandroahana azy tampotampoka dia efa ao anatin’ny fanetrena ny hajany ihany. Loza kokoa aza fa tena ao anatin’ny mampafana ny toe-draharaha eto antoerana ankatok’ity andro malazan’ny 13 mey ity no nandroahana azy. Efa olana ny amin’ny delestazy dia mbola ho olana ihany koa ny fifandraisana eo amin’ny mpira-belona sy ny mpitondra fanjakana.
Raha amin’ny fomba fijery tsotra dia ambara fa tsy mahafehy ny fitondrana intsony ireo eo amin’ny toerany. Saingy izao manko : tsy tena mazava ny antony handroahana azy hatramin’izao. Raha teratany Malagasy ny lehilahy dia efa notazonina amponja ihany koa izy izay. Teratany vahiny izy ka dia fandrohana ihany no natao taminy. Fa izao ihany koa efa nisy mpitondra fivavahana katolika anie nogadraina tamin’ny andron’ny Amiraly Didier Ratsiraka ( Mompera Jean Noel nitondra an’Ambatonilita) fa toa tsy nandrenensam-peo loatra ny rafitra katolika raha ny fitadidiako azy. Ny antony nanagadrana io mpitondra fivavahana io dia hoe fikasana handatsa-baratra ny filoha. Tsy azo natao tokoa angaha ny naneho fahatezerana ny mpitondra tamin’izany fotoana izany. Ankehitriny dia fandroahana no misy fa tena mavaivay ny toe-draharaha.
Teratany frantsay efa nipetraka maharitra teto Madagasikara ny lehilahy. Dia mamerina ny filazana ireo fandroahana ireo teratany vahiny efatra tao anatin’ny fotoana nitondran-dRavalomanana ny haino aman-jery. Teratany Frantsay ny telo ary hafa kosa ny iray saingy io hafa io dia afa-niverina teto Madagasikara ihany (Jean Marc Koumba). Ireo teratany frantsay kosa dia mbola tsy tafaverina aloha. Dia lasa ny saina, sao dia ny fitsabahana be loatra ny raharaha eto Madagasikara ny tena antony ? sao dia mbola mihevitra ry zareo fa afa-miteny izay tiany tenenina nefa vahiny monina ihany. Mety hilefitra tokoa ve ny fitondrana frantsay raha misy mpitondra fivavahana malagasy (ary misy mpitondra fivavahana malagasy tokoa any Frantsa) mitsikera mivantana ny mpitondra any an-toerana ? Tsy monina any moa ny tena ka tsy hahalala mihitsy izay tena valinteny marina. Isika Malagasy rahateo mitandrina ihany amin’ny teny izay tokony hotenenina.
ny azo lazaina dia samihafa ny antony ho an'i mompera sy i C. Chadefaux miolotra amin'ny an'i JM Koumba. ity farany ity dia niandraikitra ny fiarovan'ny filoha tamin'izy nilaza fa hijanona tsy hanao io intsony dia nalefa haingana taty ivelany satria mahalala tsiambaratelo momba ilay fomba fiarovana. rehefa novana ny fomba fiarovana sady taty aoriandriana elalela dia afa-niverina ny lehilahy.
Izy mirahalahy vazaha indray kosa dia azo lazaina fa nikitikitika politika. azo lazaina ihany koa fa tsy matahotra masom-bazaha intsony ny mpitondra ankehitriny.
Nampidirin'i Rajiosy @ 15:41, 2007-05-12 [Valio]
Fa maninona moa ny vazaha no hatahorana e ?
Nampidirin'i lapino @ 17:24, 2007-05-14 [Valio]
izy miberoberoka teny vazaha fotsiny aza knou !
Nampidirin'i Rajiosy @ 23:09, 2007-05-15 [Valio]